41 qof ayaa ku dhimatay, tobanaan ayaa lagu la'yahay dhulgariirkii Hindiya iyo daadad
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » 41 qof ayaa ku dhimatay, tobanaan ayaa lagu la'yahay dhulgariirkii Hindiya iyo daadad
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
41 qof ayaa ku dhimatay, tobanaan ayaa lagu la'yahay dhulgariirkii Hindiya iyo daadad.
In ka badan 100 dalxiisayaal ah ayaa ku xayiran gudaha goob loo tamashle tago oo ku taal Ramgarh kadib markii wabiga Kosi oo buux dhaafiyay meelo badan.
35 qof ayaa ku dhimatay dhul go ’cusub Talaadadii gobolka Uttarakhand ee Himalayan.
Ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay toddobo dhacdo oo kala duwan gobolka Nainital ee ay sida ugu daran u saameysay subaxnimadii hore ee Talaadada.
Saraakiisha ayaa sheegaya in dadaallada samatabbixintu ay qaadan doonaan ugu yaraan laba illaa saddex maalmood oo tobanaan qofna weli la la'yahay.
Sida laga soo xigtay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Hindiya, ugu yaraan 41 qof ayaa ku dhimatay tobaneeyo kalena waa lagu la’yahay dhul-go ’iyo daadad ka dhashay waqooyiga Hindiya, oo ka dhashay roobab aad u xooggan.
35 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen dhul go ’cusub Talaadadii ka dib markii lix ay ku dhinteen dhacdooyin la mid ah maalin ka hor, gobolka Himalayan ee Uttarakhand.
Ugu yaraan 30 qof ayaa la dilay dad badana weli waa la la'yahay toddobo dhacdo oo kala duwan oo ka dhacay gobolka Nainital ee ay sida ugu daran u saameysay subaxnimadii hore ee Talaadada, ka dib markii daruuraha-roobab aad u culus-ay dhaliyeen dhul-go 'taxane ah oo burburiyay dhismayaal dhowr ah.
Dhowr meelood oo fog oo ka tirsan gobolka buuraleyda ah ayaa arkay burbur baahsan roobka xooggan.
Ciidanka, Ciidanka Wax -ka -qabashada Masiibooyinka Qaranka iyo ciidanka gurmadka masiibooyinka ee gobolka ayaa dhammaantood gacan ka geysanaya dadaallada samatabixinta ee hadda ka socda Uttarakhand.
Saraakiisha ayaa sheegay in dadaallada samatabbixintu ay qaadan doonaan ugu yaraan laba illaa saddex maalmood oo tobanaan qofna weli la la'yahay.
Dhul go ’kale oo ka dhacay waqooyiga degmada Almora ayaa dilay shan qof ka dib markii dhagxaan waaweyn iyo gidaar dhoobo ah ay dumeen oo ay gurigoodii galeen.
Ugu yaraan lix kale ayaa Isniintii lagu dilay laba degmo oo ka tirsan gobolka.
The Waaxda Saadaasha Hawada ee Hindiya kordhiyay oo ballaadhiyay digniintiisa cimilada Talaadadii, iyada oo saadaalisay in roobab “aad u culus” ay ka da’i doonaan gobolka labada maalmood ee soo socda.
Xafiiska cimilada ayaa sheegay in aagag dhowr ah ay roobab ka da'een in ka badan 400mm (16 inji), taas oo sababtay dhul -go 'iyo daadad.
Maamulka ayaa amar ku bixiyay in la xiro iskuulada waxaana la mamnuucay dhammaan dhaqdhaqaaqyada diinta iyo dalxiiska ee gobolka.
In ka badan 100 dalxiisayaal ah ayaa ku xanibnaa meel loo dalxiis tago oo ku taal Ramgarh, Hindiya kadib markii wabiga Kosi oo buux -dhaaftay uu fatahay deegaano dhowr ah.
Khubarada saadaasha hawada ayaa ka digay roobab kale oo maalmaha soo socda ka dhici doona gobolka Kerala ee koonfurta halkaas oo daadadku ay hore ugu dhinteen ugu yaraan 27 qof tan iyo Jimcihii.
Biyo -xireenno badan oo ku yaal gobolka ayaa ku dhowaa calaamadda halista waxayna mas'uuliyiintu kumanaan u daad -gureynayeen goobo ammaan ah maadaama webiyada waaweyn ay buux dhaafiyeen.
Hindiyaxafiiska cimilada ayaa sheegay in roobab xoog leh ay mar kale ka da'ayaan gobolka labada maalmood ee soo socda ka dib markii maanta dib loo dhigay.